प्रभावकारी ल्यान्डिंग पृष्ठहरूको निर्माणका लागि Building चरणहरू Martech Zone
यो अवतरण पृष्ठ मूल आधारहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंको ग्राहकलाई उनीहरूको खरीददारको यात्रामा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। तर वास्तवमा यो के हो? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले कसरी विशेष रूपमा तपाईंको व्यवसाय बढाउन सक्छ?
संक्षिप्त हुन, एक प्रभावकारी अवतरण पृष्ठ एक सम्भावित ग्राहकलाई कारवाही गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो। यो कि त ईमेल सूचीको सदस्यता लिन, आउँदो घटनाको लागि दर्ता गर्न, वा उत्पादन वा सेवा खरीद गर्न सक्दछ। जबकि प्रारम्भिक लक्ष्य फरक हुन सक्छ, परिणाम उस्तै हो। र त्यो एक ग्राहकलाई भुक्तान गर्ने ग्राहकमा रूपान्तरण गर्नु हो।
अब जब हामी ल्यान्डि page पृष्ठ के हो भनेर परिभाषित गरेका छौं, त्यस कारकहरूको बारेमा कुरा गरौं जुन यसलाई ए बनाउँछ सम्मोहक वेब डिजाइन समाधान। यहाँ दिइएका चरणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो अवतरण पृष्ठलाई अपरिष्कृत बनाउन सक्नुहुन्छ।
चरण १: तपाईंको लक्ष्य दर्शक परिभाषित गर्नुहोस्
तपाईंले लेख्न सुरू गर्नु अघि, तपाईंको लक्ष्य दर्शक को हो भनेर स्पष्ट विचार हुनुपर्दछ। उमेर, लि gender्ग, शिक्षा को डिग्री, पेशा, मासिक आय, र अधिक केहि विशिष्ट विशेषताहरु दिएर एक ग्राहक व्यक्तित्व बनाउनुहोस्।
यो गरेर, तपाईं आफ्नो सन्देश स्पष्ट रूपमा दर्साउन सक्षम हुनुहुनेछ, एक विशिष्ट दुखाइ पोइन्ट ठेगाना, र तपाईंको उत्पादन को लाभ रूपरेखा। तपाइँको श्रोताको परिभाषा पछि, अर्को चरणमा जानुहोस्।
चरण २: आपसी सम्बन्धको कानून प्रयोग गर्नुहोस्
सामाजिक मनोविज्ञानीहरू यस घटनालाई गहिरो-सिट्युट आग्रहको रूपमा दर्शाउँदछ जब दया कसैले किहिले तपाईलाई केही राम्रो गर्छ भने। नि: शुल्क नमूनाहरू, विस्तृत रिपोर्ट, वा साधारण प्रतिलिपि लेखन चेकलिस्टहरू केहि उपहारहरू हुन् जुन कम्पनीहरूले यस कार्यनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछन्।
त्यसैले मानौं तपाईं प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ग्राहकको ईमेल पाउनुहोस् वा तिनीहरूलाई एक मेलि list सूचीमा सदस्यता लिनुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई एक उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्न को लागि कदम चाल्न प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईं मूल्यवान् चीज दिँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तिनीहरूले मान्नेछन् कि तपाईंले प्रदान गर्नुभएको कुरा अझ उत्तम छ।
चरण:: बाध्यकारी शीर्षक र उपशीर्षक लेख्नुहोस्
एक हेडलाईन ग्राहकलाई रिल गर्नको लागि तपाईंको मुख्य हुक हो; हेड-टर्नर जसले उनीहरूको ध्यान खिच्छ। यसले तपाईंको कुरा स्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा पार गर्न आवश्यक छ। यसैबीच, सब हेडलाइनले तपाइँको उत्पादन वा सेवा बारे थप ग्राहक प्रदान गर्न र अधिक जानकारी प्रदान गर्दछ।
दुबै लेख्दा, सधैं आफ्नो सुविधालाई लाभमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाई एक स्मार्टफोन बेच्दै हुनुहुन्छ जुन लामो ब्याट्री जीवन हो, यसको एमएएच (मिलिम्पियर-घण्टा) को बारेमा कुरा नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, भन्नुहोस् "एक पटक जाँदा तपाइँको मनपर्ने नेटफ्लिक्स शो द्वि घातुमान हेर्नुहोस्।" यस तरिका, तपाईं कसरी बताउनुहुन्छ उत्पादनले तपाईंको श्रोताको जीवनलाई असर गर्न सक्छ र तिनीहरूको जीवनमा निश्चित पीडा पोइन्ट समाधान गर्दछ।
चरण:: एक सामाजिक प्रमाण दिनुहोस्
सामाजिक प्रमाण तपाईंको अवतरण पृष्ठमा एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो किनकि यसले तपाईंको सम्भावित ग्राहकलाई देखाउँदछ कि व्यक्तिहरू तपाईंको उत्पादका सुविधाहरूबाट फाइदा लिई रहेका छन्।
% 88% उपभोक्ताहरू एक प्रयोगकर्ता समीक्षालाई व्यक्तिगत सिफारिशको रूपमा विश्वास गर्दछन्।
त्यसोभए खुशीका ग्राहकहरूबाट प्रशंसापत्र प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको रूपान्तरण दर चढाईमा हेर्नुहोस्। सबै पछि, मानिसहरू बथानको पछि लाग्छन्। र जब बथान सन्तुष्ट हुन्छन्, सम्भावित ग्राहकहरूले अनुभवको भाग हुन कार्यमा प्रवेश गर्न प्रयास गर्नेछन्।
चरण:: ठेगाना Vistors'दुखी पोइन्ट्स र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ
मानिलिनुहोस् तपाईं शुरुवातका लागि घर कसरत प्रोग्राम बेच्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाइँको एक दुखाइ पोइन्ट भनेको यो छ कि तपाइँको क्लाइन्टसँग उनीहरूको तौलबाट उठेको आत्मविश्वासको समस्या हुन सक्छ। हुनसक्छ उनीहरूलाई तिनीहरूको लुगा फिट गर्न समस्या भइरहेको छ र यसले उनीहरूको सामाजिक जीवनलाई असर गरेको छ।
अब, तपाइँको काम एक अवतरण पृष्ठ सिर्जना गर्ने हो जुन यो पेइन्ट पोइन्ट हाइलाइट गर्दछ र त्यसपछि यसलाई तपाइँको सेवा प्रयोग गरेर हटाउँछ। तपाईको हेडलाईन केहि देखिन सक्छ:
तपाईंको आफ्नै घरको आराममा एक रकिंग फिगर प्राप्त गर्नुहोस्। Or गर्मी को लागी त्यो समुद्र तट बोड तैयार गर्नुहोस्।
तपाईं त्यसपछि यसलाई आकर्षक सब हेडलाइनको साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ:
यो घर कसरत कार्यक्रम उपकरण, औषधि, वा उच्च-गियरमा निर्भर बिना तपाईंलाई स्लिम गर्न डिजाइन गरिएको हो। तपाईलाई चाहिने सबै समय, प्रेरणा, र एक अनुरूप ग्रिन्ड हो।
चरण:: कार्य गर्न कल गर्न प्रत्यक्ष आगन्तुकहरू
माथि उल्लिखित तत्वहरू समावेश गरेपछि, यो तपाईंको कल टु एक्सन सिर्जना गर्ने समय हो। यो छोटो, दृश्यात्मक हुनुपर्दछ र उत्साहजनक भाषा प्रयोग गर्दछ। एक उदाहरण को रूप मा घर कसरत कार्यक्रम संग टाँसौं।
जेनेरिकका लागि व्यवस्थित गर्नुको सट्टा पेश बटन उनीहरूको ईमेल प्राप्त गर्न, तपाईं यसो गरेर स्पाइस गर्न सक्नुहुन्छ चालक दल मा सामेल हुनुहोस् or आज त्यो बोसो जलाउन सुरु गर्नुहोस्। तपाईंले ग्राहकलाई सीधा कल-टु-एक्शन (CTA) मा अगुवाई गर्नको लागि लोभ्याउने ग्राफिक्स पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ। अरू केहि पनि छ, मद्दतको लागि भिन्न रंग प्रयोग गर्नुहोस् बटनलाई अलग पार्नुहोस्.
चरण:: टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट ... सबैकुरा
अवश्य पनि, तपाईले अझै पनि A / B परीक्षण गर्नु पर्छ तपाईको रूपान्तरण दर बढाउनको लागि। सबै कुराको परीक्षण गर्नुहोस् ... डिजाइन पक्षहरू, छविहरू, फन्टहरू, हेडलाइन्स, सब हेडलाइन्स, छविहरू, बटनहरू, कल-टु-एक्शन ... सबैकुराबाट। ल्यान्डि page पृष्ठ रणनीति डिप्लोयिंग एक परीक्षण रणनीति बिना कहिले पनि पूर्ण हुँदैन।
विभिन्न खरिद गर्ने व्यक्तिहरू र उपकरणहरूमा बहु पृष्ठहरू परीक्षण गर्नु पनि एक ठूलो रणनीति हो। यदि यो B2B रणनीति हो भने, उदाहरणका लागि, तपाइँसँग अवतरण पृष्ठ हुन सक्छ जुन तपाइँको सेवाको प्रत्येक उद्योगमा निजीकृत छ। वा यदि यो उपभोक्ता केन्द्रित अवतरण पृष्ठ हो, तपाईं उमेर, लि gender्ग, स्थान द्वारा सामग्री र इमेजरी निजीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: ल्यान्डि Page पृष्ठ प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस्
एक प्रभावकारी ल्यान्डि page पृष्ठ डिजाईन गर्न धेरै प्रयास वा समय आवश्यक पर्दैन जब तपाईंसँग सही ल्यान्डि page पृष्ठ समाधान हुन्छ। ल्यान्डि page पृष्ठ समाधानहरूले तपाईंलाई नक्कल, परीक्षण, एकीकृत गर्न र सहजै सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको साथ सुन्दर अवतरण पृष्ठहरू निर्माण गर्न सक्षम गर्दछ।
जाँच गर्नुहोस् Instapage, यो प्रयोग गर्न सजिलो ल्यान्डि page पृष्ठ समाधान हो जुन तपाईंलाई यस लेखबाट सुझावहरू लागू गर्न सशक्त पार्छ!
परीक्षण सुरू गर्नुहोस् वा Instapage को एक प्रदर्शन प्राप्त गर्नुहोस्
सम्भावित ग्राहकहरूबाट रोइ F फ्यानहरूमा
एक बाध्यकारी ल्यान्डिंग पृष्ठले तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउन सक्छ र तपाईंको व्यापार छिटो बढाउन मद्दत गर्दछ। माथि उल्लिखित चरणहरू अनुसरण गरेर, तपाईं आफ्नो ल्यान्डिंग पृष्ठको प्रभावलाई वृद्धिमा जानुहुनेछ र यसमा ट्युनि time गर्ने समय कम गर्नुहुनेछ। केवल जहिले पनि सबै चीजमाथि मान राख्नुहोस् याद गर्नुहोस् र तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूलाई समयको साथ पाल्ने फ्यानहरूमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ।
प्रकटीकरण: Martech Zone को एक सम्बद्ध छ Instapage!
टैग: प्रभावकारी अवतरण पृष्ठInstapageअवतरण पृष्ठल्यान्डिङ पृष्ठ डिजाइनअवतरण पृष्ठ शीर्षकहरूअवतरण पृष्ठ चरणहरूअवतरण पृष्ठ सुझावहरूउपशीर्षकप्रशंसापत्र
स्टेफनी सिसलोट एसईओ टोलीको एक हिस्सा हो ग्रोथ रकेट, लस एन्जलस मा आधारित एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उनी गुणस्तरीय र वेबसाईट ट्राफिकको मात्रा बढाउने जिम्मेवार छन् जसको अर्थ उनीलाई रमाईलो छ।
ईकॉमर्स तथ्याistics्क: COVID-१ Pand महामारी र खुद्रा र अनलाइनमा लकडाउन को प्रभाव